सीके राउतको देशविरुद्ध फेरि विष वमन, ‘नेपाल’ नाम प्रती नै आपत्ति - Sidha News
सीके राउतको देशविरुद्ध फेरि विष वमन, ‘नेपाल’ नाम प्रती नै आपत्ति
काठमाडौ। देश वि’खण्डनको आपराधिक सोच परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएको दाबी गरिएका सीके राउतले एकपटक फेरि देशविरुद्ध विष वमन गरेका छन् । राउतलाई नेपाल भन्ने नामसँग नै यति वैरभाव देखियो कि शहरको नाम नेपालगञ्ज राखेकोमा समेत उनले चरम आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।
राउतले सामाजिक सञ्जालमा एक आक्रोशपूर्ण टिप्पणी लेख्दै भनेका छन्, ‘भूमि हमारी, जल, जमिन, जङ्गल हमारी, साधन–स्रोत हमारा, जनता हमारी, और नाम नेपालगञ्ज ? बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर कञ्चनपुर को तो नयाँ मुल्क कहा जाता है, और वह इसिलिए कि जिले सिर्फ डेढ सौं साल पहले ही नेपाल में जबरदस्ती जोड दिया गया । और आज वह भूमि नेपालगञ्ज हो गया… ?’
बाँके जिल्लाको हाल नेपालगञ्ज भनिएको स्थानमा पहिले खासै मानवबस्ती थिएन । जंगबहादुर राणाको समयमा बाँकेमा बडाहाकिम रहेका लेफ्निेन्ट कर्णेल सिद्धिमान राजभण्डारीले नेपालगञ्ज नामाकरण गरी त्यहाँ बस्ती बसाएका थिए । राजभण्डारीको यही कामबाट प्रसन्न भएर जंगले वि.सं. १९१८ मा उनलाई कर्णेल बनाइदिएका थिए । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको भूभागमध्ये बाँके र त्यसदेखि पश्चिमको केही भूभाग जंगबहादुरको कूटनीतिक प्रयासबाट वि.सं. १९१६ मा नेपालले फिर्ता पाएको थियो । नेपालको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर, सीके राउतले नेपालगञ्ज नेपालको स्वामित्वमा नभएको र नहुनुपर्ने आशयको गम्भीर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘एमसीसी अनुदान सम्झौता’लाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सीके राउतले नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । एमसीसी अनुमोदनमा अनेक झमेला पैदा भएसँगै सीके राउतको नेपालप्रति आक्रोश पुनः उत्पन्न हुनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने टुल्सको रूपमा ‘स्थापित’ गरिएका राउतको भूमिकालाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले थप सङ्कट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना फेरि पनि देखिएको छ ।